इराकी प्रधानमन्त्रीले किन दिए राजीनामा ? अब त्यहाँ के हुन्छ ?
एजेन्सी– इराकका प्रधानमन्त्री अब्दुल महदीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । उनको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बिहिबार सरकार विरोध प्रदर्शनमा ४० भन्दा धेरै इराकी मारिएपछि प्रधानमन्त्री अब्दुलले यो निर्णय लिएका हुन् ।
अक्टोबरबाट सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा बिहिबार सबैभन्दा बढी हिंसा भएका थिए ।
इराकका सर्वोच्च शिया धामिर्क नेताले प्रदर्शनकारीविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै निन्दा गरेका थिए । र, उनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान पनि गरेका छन् ।
अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ ४ सयभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीहरु मारिएका छन् । शुक्रबार पनि कम्तिमा १५ जना मारिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले भ्रष्टाचार, बेरोजगारको अन्त्य हुनु पर्ने माग गर्दै नागरिक सुविधाको पनि माग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले त्यहाँ प्रदर्शनकारीमाथि लगातार भइरहेको गोलीबारी अत्यन्त चिन्ताजनक भएको बताएका छन् ।
इराकमा शियाका सर्वोच्च धार्मिक नेता अलि अल सिस्तानले नयाँ नेता चुन्ने आह्वान गरेपछि नै त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको एक विज्ञप्तिमा सिस्तानीको यो आह्वानसँगै आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै संसदलाई आफ्नो राजीनामा स्वीकार गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
तर, विज्ञप्तिमा उनले संसदमा कहिले राजीनामा पेश गर्नेछन् भन्नेबारे बताइएको छैन ।
उनको यो सरकारमाथि दुई महिना यताका घटनालाई सल्टाउन यो सरकार असफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो घटना खासमा एक वर्ष पहिलेको घटना हो । एक वर्ष पहिले त्यहाँ महदी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला उनले जुन सुधारको वाचा गरेका थिए, ती पूरा हुन सकेका थिएनन् । यसको विरोधमा अक्टोबरमा इराकमा युवाहरुले प्रदर्शन सुरु गरे । पहिलो ६ दिनमा नै त्यहाँ १४९ जना मानिसहरु मारिए । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा परिवर्तन गर्ने र बेरोजगारी समस्या सल्टाउने वाचा फेरि गरे ।
तर, युवाहरुले सरकारले आफ्ना कुनै पनि माग नमानेको बताए । अनि उनीहरु सडकमा उत्रिन थाले । सुरक्षाकर्मीले यी आन्दोलन दबाउने प्रयास त गरेका थिए । तर, यही बीचमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा पछि पनि त्यहाँ आन्दोलन रोकिएको छैन । शुक्रबार मात्र नासिरियामा १५ प्रदर्शनकारी मारिएका छन् ।
महदीको राजीनामालाई त्यहाँका प्रदर्शनकारीले स्वागत त गरेका छन् तर उनीहरुले यतिमात्र आफ्ना माग पूरा नहुने पनि बताएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले इराकी सरकारको भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक विफलताको कारण इरान जिम्मेवार भएको पनि बताएका छन् । उनीहरुले इरानविरुद्ध समेत नारा लगाउँदै इरानी वाणिज्य दूतावासमा आगो लगाइदिएका पनि छन् ।